Tababar Latalin & Takhasus - GO! SPECTRUM SCHOOL
spectrum School > koorsooyinka our > Saadka & Suuq-geynta
Xoogga saaridda tababarkani wuxuu ku shaqeeyaa sidii iibiye - iibiye oo leh asal farsamo. Waxaad baraneysaa macaamiisha. Waxaad ku tababartaa suuq-geynta tababarka ee waxbarashada wakhti-yar sida habboon in loola xiriiro. Waxaad baraneysaa farsamooyinka bandhigida iyo iibinta, waxaadna soo aruurin kartaa aragti ganacsi iyo aqoonta alaabta.
Xoogga saaridda tababarkani wuxuu ku jiraa shaqo sida iibiye - iibiye ku yaal dukaanka, dukaanka ama dukaanka. Waxaad baraneysaa macaamiisha. Waxaad ku tababaran kartaa si fiican. Waxaad baraneysaa farsamooyinka bandhigida iyo iibinta. Waxaad heleysaa aqoon farsamo iyo aqoon aqooneed.
Waxaad baraneysaa rarida, rarida iyo si qaab ahaan aad ugu kaydiyo badeecada bakhaarka iyagoo gacan ka helaya fargeetada. Intaa waxaa sii dheer, waxaad ku baranaysaa sida loo diyaariyo amarrada iyadoo la adeegsanayo nidaamka kumbuyuutarka adoo diyaarinaya alaabooyinka. Si kastaba ha noqotee, shaqada jirku waxay had iyo jeer muhiim u tahay bakhaarka. Shaqada Warehouse waa mid aad u ballaaran oo sidoo kale u baahan in aad si wanaagsan ula shaqeyn karto asxaabtaada.
Waxaad baraneysaa sida saxda ah ee loo helo, ku dhejiso, xiro oo alaab busto. Waxaad baraneysaa sida loo kala sooco, jeeg, diyaarinta maraakiibta, dhaqdhaqaaqa iyo kaydinta. Taas waxaad ku baraneysaa inaad isticmaasho qalabka sida qalabka gawaarida ama shilalka iyo qalabeynta sida qalabka, sanduuqa, qafis, .... Waxaad sidoo kale baran doontaa sida loo xajiyo si badbaado leh, waxtar leh iyo sida loo tiriyo, scan iyo diiwaangelinta alaabta. Ugu dambeyntii waxaad baraneysaa inaad hubiso oo aad buuxiso dukumentiyada la socda.